Ingabe Uhlakaniphile Ngekhasimende? | Martech Zone
Ingabe Uhlakaniphile Ngekhasimende?
NgoMgqibelo, Juni 1, 2013 ULwesine, May 30, 2013 Douglas Karr
Umngani, uPatrick Gibbons, nethimba lakhe ku Imininingwane ye-Walker bahlanganise ndawonye Izitatimende eziyi-10 mayelana nobuhlakani bamakhasimende futhi wanikezela isiza, Yiba Okhaliphile Amakhasimende, lapho ungahlanganyela khona izindaba zokuthi kanjani ikhasimende elihlakaniphile Ungu.
Sekuyiminyaka sifunde ubudlelwane bamakhasimende futhi manje, mhlawumbe kunanini ngaphambili, ikhasimende liyaqhubeka nokushintsha. Bafuna kakhulu futhi balindele ukuthi ubazi futhi uhambise imikhiqizo nezinsizakalo ngendlela ehambelana nezidingo zabo nezidingo zabo. Izinketho eziningi ziyatholakala. Ukushintsha kulula. Izinkampani ongakaze uzibone njengabancintisana nazo kungenzeka manje zibe usongo lwakho olukhulu.
I-Walker igxile kakhulu ekugcinweni kwamakhasimende nasekukhuleni kwamasu, kusetshenziswa ukuqagela analytics, ubuchwepheshe obunqenqemeni, nokubonisana kochwepheshe ukuletha imiphumela.
Izindleko Zedatha Eningi Kakhulu
Athini Amaphiko Ecebo Lakho Lokumaketha?